Na ọtụtụ ebe ịhọrọ site na, ọ pụrụ isi ike maka a njem na-eme ka a mkpebi banyere ebe. Iji nyere gị aka ịhọrọ nke UNESCO World Heritage saịtị na Europe na-ahụ ụzọ, anyi agwakọtala ndepụta aha:
Maka njem na-n'anya na-ahụ okpukpe ihe, e nwekwara ndị na Chartres Cathedral. Nke a Roman Catholic Katidral ụbọchị narị afọ nke 13, na i nwere ike ịhụ na ọ na ndịda ọdịda anyanwụ nke Paris. N'ikpeazụ, enwere Mont Saint-Michel na ya n'ọnụ mmiri. Ọ bụ agwaetiti na-emeri na e wusiri ike na-akpa si 8 AD, na a ebe obibi ndị mọnk dị ka ya isi Ọdịdị.
Germany bụ mba nke castles, Cathedrals, na ndị ọzọ na ịtụnanya UNESCO World Heritage saịtị. Katidral Aachen bụ ebe olili nke Charlemagne na usoro izizi mbụ e wuru na ya kemgbe oge ochie. The kasị ewu ewu na ịrịba ama na Germany bụ ihe ọzọ na katidral, a onye na Cologne. O were ọtụtụ narị afọ na-ewu malite 1248. Ọzọkwa, n'ókèala nke Alaeze Ukwu Rom na-kwesịrị a nleta. Onye ọ bụla kwesịrị ịhụ Hadrian Wall na Antonine Wall, nke e wuru na 122 AD na 142 AD, karị.